Soomaali ku geriyootey dalka Ciraaq - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soomaali ku geriyootey dalka Ciraaq
Soomaali Ciraaq ku geeriyootey
La daabacay måndag 12 januari 2015 kl 14.20
Laba ka mid ah dhallin-yarada soomaali-iswiidhishka reer Örebro ee u socdaashay sidii ey uga barbar dagaalami lahaayeen ururka xag-jirka ee IS ayaa lagu soo warramayaa iney ku dhinteen dagaalo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq.
Labada dhallin-yaro ayaa la shegay iney geeriyoodeen dhammaadkii toddobaadkii ina dhaafay, sida uu sheegay Jamaal Lamhandi, ahna guddoomiyaha masjidka Örebbro. - Waalidiinta labda wiil ayaa xaqiijiyey in dhallaankoodu carrigaa ku geeriyoodeen. Hase yeeshee ey akhbaartaasi i soo gaartay aniga gabagabadii toddobaadkan, sida uu sheegay Jamal Lamhandi.
Jamal Lamhandi ayaa sidoo kale sheegay in aanu hayn akhbaar intaa ka bax-san ee la xiriira geerida wiilashaa.
Mahdi Warsame, guddoomiyaha ururka Afrikas horns kulturcentret ayaa sheegay mar uu u warramayay idaacadda la iska daawado ee Svt in akhbaartaa laga soo xigtay waalidkii dhallin-yarada, iyadoona uu ururkiisu isku dayayo sidii uu gacan ugu fidin lagaa waalidiinta ey la soo gudboonaatay murugadu.
- Halkeedii ayaan ka sii wadi doonnaa howlihii aan kaga hor-tageeyney dhallin-yarada u socdaasha dagaalalada ka aloo-san dalka Suuriya iyo Ciraaq, sida uu sheegay Mahdi Warsame.
Wixii ka dambeeyay kuleeylihii 2012 ayaa lagu qiyaasayaa iney u socdaaleen dalka Suuriya sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen ururka IS muwaadiniin iswiidhish ah oo tiradoodu gaarsii-san yihiin 130, sida ay qabto hayadda nabad-sugidda ee dalka Iswiidhen oo magaceeda loo soo gaabiyo Säpo.